I-AutoCAD Civil 3D, ukungenisa amanqaku kwiziko ledatha langaphandle-iGeofumed
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/AutoCAD Civil 3D, amaphumela angeniso esuka kwisiseko sedatha yangaphandle
Kule posi siza kubona indlela yokungenisa idatha kwiziko ledatha langaphandle, nangona kuya kufuneka siqwalasele ezinye izinto ezongezelelweyo ekuphatheni amanqaku. Siza kusekelwa kumzekelo wokuziswa kwe-Civil 3D tutorial, usebenzisa amanqaku amanqaku-1.dwg kunye namanqaku.mdb, ekugqibeleni kukho amakhonkco okuwakhuphela.
Yakha i nkcazelo
Injongo yale nto kukuqwalasela indlela i-Civil 3D eya kuziphatha ngayo iingongoma esizithengayo, apho ziya kugcinwa kwaye phantsi kweyiphi indlela eya kuzikhetha ngayo kwiziko ledatha. Ukuba sivula isiseko sedatha, ngaphandle kwe-y, x, z nokulungelelanisa sibona inkcazo yentsimi (i-DSC) inoluhlobo lwendawo leyo sifuna ukubanakho ukucoca la manqaku.
Kuqala sivula amanqaku efayile-1.dwg esele inezakhelo ezilungiselelwe lo msebenzi. Ngoku kwindawo yezixhobo, kwi "useto" ithebhu, sikhetha "iiNkcazo zeSeti eziphambili" kwaye ucofe ekunene kwaye ukhethe "ezintsha".
Oku kuvula ipaneli apho siza kufaka igama lesethi, esiza kuthiwa igama kunye nenkcazelo.
Ndisebenzisa igama elithi "iSaqhwithi" kunye nenkcazo "indawo yolawulo lwesaqhwithi". Emva koko senza "ukwamkela".
Ngoku masichaze indlela i-Civil 3D eya kubamba ngayo isihlunu kokungenisa idatha kwaye ukhethe ugcino apho luya kugcinwa khona.
Sandise isethi ngokuchofoza ngokuchanekileyo kwaye sikhetha "Hlela Keys", esivumela ukuba sibone iipropati kwimodi ye-panorama.
Apha siza kufaka iikhowudi ezimbini, yokuqala ezobizwa ngokuba yi-POND *, apha siza kukhetha i-Layer V-NODE-STRM
kunye nezinye MHST *, wena Izakutshintsha kwakhona ifomati Storm MH kwimeko yesibini, oko kwakuya kuthetha ukuba oku kuya kuba ileyibheli wakhe wokuqala kodwa uliyeke linjalo $ *, ukuze inkcazelo ifike kwaye uhlala kule nwebu efanayo.
Oku kuya kuthetha ukuba naliphi na inqaku inkcazo yalo iqala nge-POND okanye nge-MHST, ilandelwa lilo naliphi na uphawu elizakufakwa kwingqokelela. Gcina ukhumbula ukuba le nkqubo "inobuzaza", oko kuthetha ukuba inomdla kwimeko.
Kuzo zombini iimeko, zombini isitayela kunye nesitayela sesimboli zikhutshaziwe. Ukuze ulawule kwiqondo leqela leqela, yinto elandelayo esiya kuyenza.
Ekugqibeleni sikhetha utolo oluluhlaza kwikhoneni lekunene ukugcina ukucwangciswa.
2. Yakha amaqela amanqaku
Ngoku okunomdla kuthi kukuba amanqaku angenisiweyo ahlelwe ngokwamaqela, kule meko ngokophawu abanalo kwiziko ledatha. Ukwenza oku, siya kwi "prospector" ithebhu kwaye kumaqela amanqaku sikhethe ngokunqakraza-ekunene, sikhethe "okutsha".
Siza kuqala senze iqela esiza kulibiza ngokuba yi "storm manholes" kwaye siyishiya indawo kunye neelebheli zesitayile njengesiqhelo. Ke kwisihluzo somdlalo (eluhlaza Ukutshatisa i-Desc) sikhetha i-MHST *, oku kuyakwenza onke amanqaku anayo le nto kwingcaciso yakhe baya kulu qela.
Iqela lesibini uya kubiza "Ukuvalelwa Point" ndihambe lokucoca Pond *, eshiya Standard in style nendawo ileyibheli nangona oku kunokwenziwa kanye iqela ebizwa ngokuba "Points _all".
Ewe, ukuba sibona ithebhu yeQery Builder, yile nto esiyikhethile kwi-SQL, oku kuthetha ukuba umntu owaziyo le khowudi unokukwenza izinto ezinzima.
3. Ingongoma yokungenisa kwiziko ledatha
Into eyinkimbinkimbi kakhulu esiyenzileyo, ngoku kuza oku kukungenisa.
Njalo kwithebhu yomculi, khetha Amaphupha kunye nenqakraza ye mouse kwaye ukhethe "Yakha".
Oku kubonisa iphaneli enokhetho olwahlukileyo, kule meko siya kusebenzisa elisekunene ekungeniseni amanqaku. Nje ukuba ukhethe, sibuze
Kubalulekile ukucacisa ukuba kwifomathi ungakhetha ezinye iinketho zokungenisa idatha ezifana nesicatshulwa esahlukileyo ngama-commas, izikhala kunye neendlela ezahlukeneyo zolawulo lwe-point, ulungelelanisa x, y, z
Apha sikhetha ukuba ukungenisa kuvela kwindawo yogcino lwangaphandle kwaye emva koko sikhethe indlela yedatha. Sishiya ezinye iindlela ezisezantsi zingakhethwanga, kulungile.
Isiphumo sokugqibela singaboniswa ngokuchanekileyo kwi "_all points" kwaye ukhetha ukusondeza ekuboneni ngokupheleleyo kweengongoma.
Ngokuzisa i mouse ngapha amanqaku, kwencochoyi yesixhobo ubonisa iimpawu ngongoma, cinga ukuba kuyimfuneko ekunene nqakraza kwiqela ngalinye leendawo kwaye khetha iimpawu, ukuba icon ezimthubi indawo lwesikhuzo kufuneka zikhethwe ukhetho lokuhlaziya.
Ukwenza umsebenzi ongayilanda apha ifayile ye dwg ngamanqaku angenisiwe.
Ukuba ufuna ukuyenza kwakhona, ungacima onke amanqaku akhoyo ukungenisa kwakhona ngokulandela amanyathelo kulo msebenzi.
3D civil Dwg
kuba andinakukwazi ukungenisa i-ptos phezulu. kwinkundla yomntu kunye negrafu kwaye uyomelele ukuze ufumane ivolumu ukuba unokunceda
Sawubona, yintoni na? Ndiyakwazi ukukucela ifomathi yedatha kwi .mdb ukwenza. Siyabulela kunye nokubhekiselele.
Enkosi izifundo, ngoku njengoko ngenisa iibhloko ukuhlala umzobo yam, okt Acad ilizwe izitshixo wena siven ukungenisa ibhloko nezikhululo izibonda imithi, ekugqibeleni, baqonde intsebenziswano kule tema.si kungaba yenza kwi-3d yomphakathi kwaye yintoni inqubo.
Nceda ukuba Cacisa indlela bengasuphavayizwanga LABEL engagqibekanga AUDLEY, TOCA ME KUBA Njalo CONFUGURARLOS IMPORTO IMIBUZO.
NDIYA KULINDA I-TIP.
NOKUBA NAKUBA NGOKUBA NAKUBA
g! Ndiyabonga kakhulu ngegalelo lakho. Kuye kunceda kum
Ewe, akukho nto ingaba yintoni eyenzekayo. Kungenzeka ukuba ifomathi ayinjengamanani kodwa njengabalinganiswa, kodwa akufanele kube yingxaki.
NAKUBA NGOKUBA UTHANDA NGOKUSEBENZISWA KWEMPILO
enkosi izifundo ilungile, kodwa nengxaki xa kwenza kanye njengoko xa ungenisa iingongoma kuvimba e Access indixelela q akakwazi okanye ifayile yonakele, enkosi ungandinceda xa ndinganyulwanga ukuba wenza into engalunganga
Ndiyabulela kule mivuzo!
Akuyimfuneko, inyaniso kukuba i-Desktop Desktop izuze into ethile kwi-SoftDesk ekufuneka ibe neenkcukacha ezigcinwe kwi-criteria kwaye ngoxa kwakungekho projekthi evulekile eyayingenakwenzeka ukusebenza.
Kwimeko yezoLuntu, nangona ingadibaniswa kwisiseko sedata, imephu ingagcina iimpawu ezifana ne-xml.
Okokuqala kukubonga ngemfundiso oyinika iphepha lakho, kwaye ukungathandabuzeki komntu 3d ngokungafani nedesktophu yomhlaba akuyimfuneko ukudibanisa neprojekthi.
Ndiyabonga Mfundisi, ndaqhubeka nale ncediso, njengengcaciso yomhlaba, njl njl